Global Voices teny Malagasy » Nosokafan’i Bangladesy Ny YouTube Taorian’ny Fandraràna Nandritra Ny Valo Volana · Global Voices teny Malagasy » Print
Nosokafan'i Bangladesy Ny YouTube Taorian'ny Fandraràna Nandritra Ny Valo Volana
Voadika ny 11 Jona 2013 13:18 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Candy
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Nanala ny fibahanany ny YouTube tany Bangladesy  ireo tompon'andraikitry ny fifandraisan-davitra ao Bangladesy taorian'ny 260 andro namehipehezana ny fahafahana miditra amin'ilay tranonkala fifampizaràna lahatsary tao anatin'ny firenena.
Nanakana ny YouTube ny Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC) – Sampan-draharaha Mpandrindra ny Fifandraisandavira ao Bangladesy – ny 17 Septambra 2012, mba hanakanana ny olona tsy hijery ny lahatsary Amerikanina mitondra ny lohateny hoe “Ny tsy fahalalàn'ny silamo”, izay manesoeso ny Silamo sy ny Mpaminany Hazrat Muhammad (pbuh). Ny “alika mpiandry” (Mpanara-maso) ny serasera dia nanambara fa nifandray tamin'ny Google izy talohan'ny fanakànana nangataka azy ireo mba hanala ilay lahatsary, saingy nandà ny hanatanteraka izany ny Google araka ny tatitra.
Nalàna ny sakana ny 5 Jiona 2013, nahazoan'ireo Bangdeshi mpampiasa aterineto miditra indray amin'ilay tranonkala.
Sary an'i HernandoJoseAJ, mpampiasa Wikimedia Commons . CC By-SA
Nitondra fatiantoka ho an'ny toekaren'i Bangladesy ilay sakana, araka ny voalazan'i Fahim Mashroor, Sekretera taloha tao amin'ny Bangladesh Association of Software and Information Services – Fikambanan'ireo mpanome tolotra momba ny rindrambaiko sy ny vaovao. Nilaza izy tao amin'ny tafatafa  [bn] niaraka tamin'ny German radio Deutsche Welle fa nisedra olana ny indostrian'ny famoahana asa ho any ivelany vokatr'ilay sakana.
Tamin'ny taon-dasa nahazo 57 tapitrisa dolara ireo Bangladeshi tamin'ny indostrian'ny fanaovana asa navoaka ho any ivelany tamin'ny aterineto  ka nahita fitomboana 54% isan-taona. Ny valo volana nisian'ny sakana tamin'ny YouTube dia hampihena io fitomboana io amin'ity taona ity.
Tsy ny fatiantoka ara-toekarena ihany, mpianatra maro, ireo mpampianatra sy mpikaroka dia niatrika olana tamin'ny fianarany noho ny tsy nahafahany nahazo ireo lahatsary tamin'ny aterineto mikasika ny fianarana miantrano ao amin'ny YouTube.
Nankalaza ny fiverenan'ny fahazoana miditra amin'ny YouTube indray ireo mpampiasa tranonkala. Khaledur Rahman Shakil (@krshakil ) naneho ny hafaliany:
@krshakil : Maimaimpoana ny YouTube! Ravaho girilandy izy. Alefa ry fahafahana!
Neel Aparajita (@oporajita789 ) dia nankalaza ireo hafaliana amin'ny fahafahan'ny fanaovana tambajotra sosialy:
@oporajita789 : Hita mivaingna eny rehetra eny aty anaty media sosialy ny hafaliana amin'ny fahafahan'ny YouTube tamin'ny gadran'ireo sivan. Miresaka an'io avokoa ny tsirairay #feelinggreat
Na dia voasakana aza ny YouTube, maro ireo any Bangladesy no afaka nandingana ilay fibahanana. Ashickur Rahman Noor (@ashicunnoor ) nahatsiaro io tranga io tao amin'ny Twitter :
@ashicunnoor : ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বাধীনতা… 🙂 সোজা পথে অনেকদিন পর ইউটিউবে হান্দাইলাম… #চৌক্ষেপানি! 🙂
@ashicunnoor : Ny fahafahana niomerikan'i Bangladesy. Afaka mahazo YouTube tsy misy fitaovana fandinganana:) #tearsinmyeyes 🙂
Nanontany izay antny ao ambadik'ilay fanakànana fotoana ela ilay bilaogera, Bahadur Bappi,  tao amin'ny vovonanan'ny vondrom-piarahamonin'ny mpanao bilaogy Somewhereinblog.net:
Ny fanontaniako dia hoe inona no tombontsoa azon'ny governemanta nanao ny sakana tamin'ny YouTube nandritra ny valo volana?
Hajiantsarin'ny mpampiasa Flickr spainvictorcompany  ary navoaka teo ambanin'ny Fahazoan-dalana CC (BY-NC-SA) 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/11/49163/
 Nanala ny fibahanany ny YouTube tany Bangladesy: http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2013/jun/05/youtube-ban-be-lifted
 57 tapitrisa dolara : http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMTFfMjVfMTJfMF8zMV8xNTEwMzI%3D&feature=c3BlY2lhbHNOZXdz&na=RkUgRURVQ0FUSU9O
 asa navoaka ho any ivelany tamin'ny aterineto: http://en.wikipedia.org/wiki/Online_outsourcing
 Bahadur Bappi,: http://www.somewhereinblog.net/blog/bappea2/29838188